Ọpụpụ gị na-abaghị uru na-enweghị Mgbalị Inbound | Martech Zone
Ọpụpụ gị na-abaghị uru na-enweghị Mgbalị Inbound
Wednesday, June 8, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ blọgụ m ogologo oge, ị maara na okwu ahụ vesos mgbe mgbe na-eziga m na iwe kpuru ìsì. Ndị folks karịrị SoftwareAdvice zigara nkọwa zuru ezu, Inbound vs Outbound Marketing: Ihe mbu maka ndi Newbies ma obu ndi mgbanwe.
Onye ndu ahụ na-arụ ọrụ kachasị mma nke ịgagharị na atụmatụ, esemokwu dị iche iche, yana ngwaọrụ nke atụmatụ inbound na atụmatụ ọpụpụ. Ọ bara uru ịgụ ya nke mere gaa lelee ya. Nke a bụ otu n'ime eserese ahụ:
Ọpụpụ adịghị arụ ọrụ na-enweghị Inbound
Anyị na òtù ndị na-arụ ọrụ obere obere ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Enweghi otu iwu a m na-eke:
Bozụ ahịa na-abaghị uru na-enweghị usoro inbound marketing
You nwere ike ịme oku oyi na iji zụlite mmekọrịta (ọpụpụ) wee nweta ahịa? N'ezie! Ekwughi m na ọpụpụ adịghị arụ ọrụ na-enweghị usoro inbound, ekwuru m na ọ bụ adighi ike.
Kedu ihe ị chere ihe mbụ onye ahịa ma ọ bụ atụmanya azụmaahịa na-eme mgbe ọ mụsịrị azụmahịa gị site na mpempe akwụkwọ ozi, oku oyi, ma ọ bụ nleta? N'ezie, gịnị ka ị chere na ha na-eme mgbe ha na-amụ akwụkwọ azụmahịa gị site na mpempe akwụkwọ ozi, oku oyi, ma ọ bụ nleta?
Ọpụpụ gị na-eduga gị na ntanetị!
Nchọgharị Google dị mfe iji chọta saịtị gị ma chọpụta ọdịnaya gị ga-esokarị oku oyi. Mgbe ahụ, ha gafere na LinkedIn ma nyochaa nzere gị yana ma ị naghị ele anya. Na mgbe ahụ, ha na-esite na mgbasa ozi mmekọrịta na netwọk ha tụkwasịrị obi wee jụọ, Ọ dị onye rụtụrụla ndị a?
Ma nke ahụ bụ oge dị oke mkpa nke ma ndị otu na-apụ apụ kwesịrị itinye ọtụtụ nleta iji zụlite ụzọ, tinye nrụgide na-enweghị isi iji mechie ire ere ahụ, ma ọ bụ tufuo gị onye asọmpi nke na-arụ ọrụ ka mma na ahịa ahịa ha.
Anyị na-adịbeghị anya na-akọrọ ihe Ndị CMO nọ na-achọ ụlọ ọrụ ha, na akụkụ abụọ dị ihe ọmụma na enyemaka. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ gị adịghị egosipụta nke ọma na ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, yana site na ngwa siri ike Ọbá akwụkwọ ọdịnaya, Ohere gi imechi ire ere ebelata.
Kasị njọ, ọ bụrụ na ndị asọmpi gị na-anọchite anya ya nke ọma, ugbu a ị nwere atụmanya na-ekpo ọkụ nke ga-amalite ịzụ ahịa. Ma dịka ha na-enyocha ọnọdụ pụrụ iche nke onye na-asọmpi gị na ndu na oghere, ha ga-enwe obi abụọ ma ha nwere ike iji ọrụ gị ma ọ bụ na ha agaghị.
Na Outbound Na-eme Ka Mgbali Na-abawanye
M ga-agbakwunye gem ọzọ ebe a… inbound na-arụ ọrụ nke ọma na ịpụ ahịa ahịa, kwa! You kpọtụrụla atụmanya nke ebudatara ihe ole na ole, na-emepe emepe na ịpị akwụkwọ akụkọ email gị ma na-eleta saịtị gị site n'oge ruo n'oge?
Ọ bụghị vesos, ndi be anyi! Mgbalị ị na-eme n'ahịa ị na-aga n'ihu ga-abawanye n'ụzọ dị ịrịba ama na atụmatụ azụmaahịa inbound pụtara ìhè. Usoro ịre ahịa inbound gị ga-aka mma mgbe ị jiri data ahụ mee ka atụmatụ azụmaahịa gị na-apụta.
Tags: inbound marketinginbound ahịa nduinbound vesos outboundinbound vs outboundahia n'èzíndu ahia ahiandụmọdụvesosvs
Ihe ahia ahia ahia di elu nke di elu na obere ahia
Nsonaazụ Ndị Ahịa dị ka Ọdịnaya: Otu Dan Anton si Ghaa Azụmaahịa SEO ya na 7 Figures Leverageging Testimonials
Jun 9, 2016 na 2:27 AM
Daalụ maka ihe ọmụma. Na-abata ma ọ bụ na-apụ apụ, ịzụ ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa niile ma na-enweghị ya ị nweghị ebe ọ bụla na mgbasa ozi.
Sep 21, 2017 na 6: 26 AM
Inbound anọwo ebe ahụ ruo oge ụfọdụ na anyị anaghị amata ya n'ihi mkpa ọ dị maka ọpụpụ ahịa. Ebe ọ bụ na hasntanetị amụbawo na ezinụlọ ọ bụla, ọ na-esiri ike ịjụ oke iru na mmetụta nke ahịa inbound.